अग्रज र प्रायोजकको भावनामा ठेस नपुग्ने गरी मेला संचालन भएको छ – प्रजापती – Pokhara Voice
अग्रज र प्रायोजकको भावनामा ठेस नपुग्ने गरी मेला संचालन भएको छ – प्रजापती
राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला २०७६
By Ghanashyam Lamichhane	 On २१ पुष २०७६, सोमबार २०:४०
पोखराको समग्र आर्थिक उन्नतीको आधारका रुपमा पहिचान वनाएको राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला २०७६ अहिले पोखरामा संचालन भईरहेको छ । अहिले सम्म आई पुग्दा मेलाले सोचे अनुसारको सफलता पाएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । मेला उद्योग, व्यवसाय तथा स्थानीय उत्पादनको प्रबद्र्धन र बजारीकरणको लक्ष्यसहित आयोजित पोखरालाई अन्तराष्ट्रिय तथा स्मार्ट सहर वनाउन आयोजना गरिएको आयोजकको दावी छ । जारी मेलाको आर्थिक उद्देश्य तथा प्रायोजकको सहयोग लगाएत समग्र मेलाका वारेमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष तथा मेला आयोजक समिती अन्र्तगतको प्रायोजक व्यवस्थापन उप समितीका संगोजक पवन प्रजापतीसँग पोखरा भ्वाईसले गरेको कुराकानी :–
पोखराकै पहिलो मेलाको रुपमा स्थापीत पोखरा औद्योगिक तथा व्यापार मेलाको अवस्था कस्तो छ पवन जी ?
हामीले २०४१ सालदेखी निरन्तर र पोखरामै पहिलो पटक मेला आयोजना गर्दा तत्कालिन पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हेम वहादुर प्रधानको एउटै चाहना थियो मेलालाई सफल वनाउन सकियो भने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसैले हाम्रो अहिलेको चाहना पनि त्यहि हो । मेलामो नेपाली स्थानीउ औद्योगिक र कृषी उत्पादनहरुलाई वढी भन्दा वढी प्राथमिकता दिने ।
तपाँईले भने झै अहिले मेला संचालन भएको छ त ?
पहिला भन्दा अहिले भईरहेको मेलालाई सस्थाको मर्म अनुसार नभएको हो कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ र यस विषयमा संघमा निकै पटक छलफल पनि भएको छ तर पनि केहि परिमार्जन गर्न आवस्यक रहेको भने पक्के हो । पहिला थोरै उद्योग थिए अहिले यातायातको सहज पहुँचले गर्दा देशै भरका उद्योागीको चाहनालाई ध्यान दिदा केहि फरक जस्तो भएको छ । तर पनि हामी अग्रजको चाहना भन्दा वाहिर नजाने प्रयास गरेका छौं ।
अनि मेला संचालनको लक्ष्य र मेलाको अहिलेको अवस्थामा कत्तिको तालमेल भएको छ ?
हामीले पोखरामा हरेक वर्ष संचालन गर्ने गरेको मेला यो वर्ष नाम एउटै भए पनि केहि फरक गर्ने सोचका साथ संचालन गरेका थियौं । आज सम्मको अवस्था हेर्दा हामी सफल भएको पाएका छौं । मेलामा आउनेहरु रमाईलो मात्रै हेर्न नआउन् केहि जानकारी लिनका लागि पनि आउन् भन्ने चाहेका थियौ आज सम्ममा त्यहि भएको छ । हामीले यसपालि नया गर्न खोज्नुको मतलव भनेको पोखरा उद्योग वाणिज्य महासंघको मेला पोखराका सवै मेलाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । मेलाको सफलता मेलाले कमाएको नाफा र मेला अवलोकनका लागि आउने दर्शकको चापमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने मान्यतालाई परिवर्तन गराउनु पनि हो ।
दश वर्ष अगाडीको मेला अवलोकन तरिका र मेलाको वनावट पनि एउटै भए जस्तो लाग्दैन ?
हो हामीलाई त्यो कुरा खड्किएको छ । अव हामीले गर्ने मेलाका स्टलहरु पनि नया तरिकाले डिजायन हुनु जरुरी छ । नत्र भने मेला भनेको दोहरी र वच्चाहरुको पीङ्ग वाहेक अरु हुदैन । मेलामा केहि नया दिन सक्नु पर्छ नत्र मेला गर्नुको अर्थ हुदैन । अनि मेलामा व्यापार व्यवसाय मात्रै होईन आर्थिक र समृद्धिको लागि वहस पनि संचालन गरिनु पर्छ ।
स्टल निर्माणमा नया पन भनेको के हो ?
सवै भन्दा पहिला मेलाका स्टलहरुको स्थापना र डिजायन दर्शकलाई पथ निर्माणका लागि मात्रै गरे जस्तो हुनु हुदैन । मेरो सोच भनेको मेला हातको औलाको डिजायनमा निर्माण गरिनु पर्छ । त्यो भेनेको के हो भने मेलाको मुख्य गेटवाट छिरेपछि दर्शकको चाहना अनुसार जुन वस्तुहरुको प्याभेलियनमा जाने हो त्यहि छिर्नको लागि छुट्टा छुट्टै औला जसरी स्टलहरु निर्माण गरिनु पर्छ । अहिले त के छ भने कपडा किन्न वा हेर्नु प¥यो भने कृषि सामाग्रीको स्टल हूदै जानु पर्ने छ । जसलाई कृषि सामाग्रीको वारेमा जानकारी नै लिनु छैन त्यस्ता दर्शकलाई वजर्रजस्त किन कृषिको स्टलहरुमा हिडाउनु । त्यसैले अवका मेलामा जुन वस्तुको स्टलहरुमा जान ईच्छा लाग्यो त्यहिमात्रै जान मिल्ने गरि स्टल निर्माण गरिनु पर्छ । जुन अवको समय सापेक्ष र व्यवस्थित पनि हुन सक्छ ।
तपाई त प्रायोजक व्यवस्थापन समितीको संयोजक पनि हो यो वर्ष कस्तो छ ?
हामीले यो वर्ष गत वर्षहरुमा भन्दा राम्रो आर्थिक व्यवस्थापनका लागि प्रायोजक खोज्न सफल भएका छौं । प्रायोजक भनेको हामीलाई लाग्ने खर्च व्यवस्थापन गर्ने काम मात्रै होईन प्रायोजन गर्ने सबै व्यवसायीहरुको उद्योग व्यवसायको सामाग्रीहरुको वजारी करण गर्ने र उपभोत्तालाई जानकारी दिनु पनि हो । यो वर्ष हामी यो काममा सफल भएका छौं ।
मेला संचालन भईसकेपछि प्रायोजकहरुको मनस्थिती कस्तो पाउनु भएको छ ?
यो मेलाबाट उद्योगी व्यवसायीले आफूले उत्पादन गरेका सामग्रीको बिक्री गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने र उपभोक्ताले आफूले चाहेको सामग्री रोजेर लैजान पाउने अनि प्रायोजक कर्ताहरुले प्रायोजनमार्फत आफ्नो ब्राण्डको प्रचारप्रसार गरेर ब्राण्डिङ गर्न पाउने थलो भनेको राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला नै हो । त्यहि भएर राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलालाई प्रायोजकहरुले पनि उत्साहका साथ सहयोग गरेका छन् । हामीले जती स्थानमा गएर मेलाको प्रायोजकका लागि अनुरोध ग¥यौ सवै जना एक वचन मै प्रायोजन गर्न राजी भएका छन् । संघ र उत्पादक कम्पनीहरुबीच नङ र मासुको सम्बन्ध भएकैले प्रायोजकहरुले खुशी साथ सहकार्य गर्न तयार भएका हुन् ।